အွန်လိုင်းစတိုးကိုထိထိရောက်ရောက်ဘယ်လိုနေရာချရမယ်ဆိုတဲ့ Semalt Advice
အကယ်၍ သင်သည်အွန်လိုင်းစတိုးတစ်ခုဖွင့်ထားပါကသင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်မှန်ကန်သောအသွားအလာပမာဏသည်အောင်မြင်မှုအတွက်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသတိပြုသင့်သည်။ သင်အွန်လိုင်းစတိုး၏ကျယ်ပြန့်သောကမ်းလှမ်းမှုနှင့်၎င်း၏အမျိုးအစားမှထုတ်ကုန်များ၏ဆွဲဆောင်မှုစျေးနှုန်းများသည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်သို့ ၀ ယ်ယူသူအမြောက်အများကိုယူဆောင်လာမည်ကိုသင်အားကိုးနိုင်ပါသည်။ ဒီတော့ e-shop positioning ရဲ့အခြေခံအကြောင်းပြောကြရအောင်။
အွန်လိုင်းစတိုးများကိုနေရာချထားခြင်းနည်းလမ်းများသည်အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များအတွက်အသုံးပြုသောနည်းများနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည် - သို့သော်၎င်းကိုအထူးဂရုပြုရန်အဘယ်အရာကိုသိထားသင့်သည်၊ အွန်လိုင်းစတိုးများ၏နေရာချထား - ဤသည်ကိုယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အာရုံစိုက်လိမ့်မည်။ ဒီတော့ဘာအဆင်သင့်လဲ စကြပါစို့
အစအ ဦး မှ စ၍ အွန်လိုင်းစတိုးတစ်ခု၏အနေအထားကဘာလဲဆိုတာကိုသိချင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တစ် ဦး ဟာအကြီးမားဆုံးပြdilနာတစ်ခု - စတိုးဆိုင်နာမည်ဘယ်လိုခေါ်ရမလဲ။ စမတ်၊ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအမည်များသည်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဖောက်သည်များကိုနှစ်သက်ကောင်းနှစ်သက်နိုင်သော်လည်းရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များအတွက်သူတို့နှစ်သက်မည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ကိုက်ညီမည့်အပြင်ကျွန်ုပ်တို့ပေးသောထုတ်ကုန်နှင့်ပါ ၀ င်ပတ်သက်မှုရှိသည့်နာမည်တစ်ခုကိုရှာရန်လိုအပ်သည်။
သတိထားရမည့်ဒုတိယအရာမှာသော့ချက်စာလုံးများကိုမှန်ကန်စွာရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အွန်လိုင်းစတိုးတစ်ခုတွင်၎င်းတို့တွင်အများအပြားရှိသင့်ပြီးအမြီးရှည်ထားသောစကားစုများပါသင့်သည်။ သူတို့ကသင့်အား ၀ ယ်ရန်ဆုံးဖြတ်ပြီးဖြစ်သောကြောင့် ၀ ယ်ရန်ဆုံးဖြတ်ပြီးသောဖောက်သည်ထံရောက်ရှိရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည် မြင့်မားသောပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်သီးခြားထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြင့်စာမျက်နှာခွဲများနှင့်ကိုက်ညီသင့်သောကြောင့်သော့ချက်စာလုံးအရေအတွက်သည်ကြီးမားသင့်သည်။ SERP နှင့်ကိုက်ညီသောသော့ချက်စာလုံးနှင့်ကိုက်ညီရန်အာမခံသည်။
အသေးစိတ်နှင့်တိကျစွာသတ်မှတ်ထားသောစာပိုဒ်တိုများအမြောက်အမြားကိုနေရာချခြင်းဟုခေါ်သည် ကျယ်ပြန့် positioning ကို။
သင်၏စီးပွားရေးနှင့်သင့်လျော်သောသော့ချက်စာလုံးများကိုစတင်လေ့လာသင့်ကြောင်းသတိရပါ ၀ က်ဘ်ဆိုက်နှင့်ယင်း၏ပါ ၀ င်မှုကိုအသေးစိတ်လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း။ သင်၏ကုမ္ပဏီ၏အရေးအပါဆုံးတန်ဖိုးများနှင့်သင့်အတွက်အရေးကြီးဆုံးထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအာရုံစိုက်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သင်၏စီးပွားရေးကိုကောင်းမွန်စွာသွင်ပြင်လက္ခဏာပြသည့်သော့ချက်စကားစုများကိုဂရုပြုပါ။ အသုံးပြုသူများကိုသင်ဘာလုပ်သည်၊ သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်သူတို့ရှာတွေ့နိုင်သည်များကိုရှင်းလင်းစွာပြောလိမ့်မည်။
ကဲ့သို့သောကိရိယာများ အပ်နှံ SEO ဆိုသည်မှာ Dashboard, Google Trends သို့မဟုတ် Google Keyword Planner သည်သော့ချက်စာလုံးများကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆောင်းပါးတွင် Dedicated SEO Dashboard အကြောင်းပိုမိုလေ့လာနိုင်သည်။ Dedicated SEO Dashboard DSD မှမည်သို့အကျိုးခံစားရမည်နည်း။
Dedicated SEO Dashboard - ဘာတွေပါလဲ။
TOP အတွက်သော့ချက်စာလုံးများ။ ဤကဏ္ section သည်ဂူဂဲလ်အော်ဂဲနစ်ရှာဖွေမှုရလဒ်များတွင် ၀ ဘ်ဆိုဒ်အတွက်အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောသော့ချက်စာလုံးများ၊ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောစာမျက်နှာများနှင့်သီးသန့်သော့ချက်စာလုံးတစ်ခုအတွက်သူတို့၏ SERP ရာထူးများကိုဖော်ပြထားသည်။
အကောင်းဆုံးစာမျက်နှာများ။ ဤကဏ္ section သည်အော်ဂဲနစ်အသွားအလာအများဆုံးဖြစ်သည့်စာမျက်နှာများကိုဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ဖော်ပြသည်။
Webpage Analyzer။ ဤကိရိယာသည်ကွန်ရက်စာမျက်နှာ၏စွမ်းဆောင်နိုင်မှု၊ မိုဘိုင်းအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနိုင်မှု၊ ဆိုရှယ်မီဒီယာရှိနေမှု၊ စာမျက်နှာပေါ်ရှိ SEO နှင့်အခြားမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအချက်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်။
plagiarism Checker။ ဒီ tool သည်ဂူဂဲလ်ကသင်၏ဝဘ်စာမျက်နှာကို plagiarism-free သို့မဟုတ်ထူးခြားမှုမရှိသောအရင်းအမြစ်အဖြစ်မှတ်ယူမထားကိုရှာဖွေရန်ကူညီသည်။
စာမျက်နှာမြန်နှုန်း Analyzer။ သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏ ၀ န်ဆောင်မှုအချိန်သည်ဂူဂဲလ်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိဤကိရိယာကိုအသုံးပြုသည်
သင်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင်၊ ဒေသခံတည်နေရာနဲ့ဒေသဆိုင်ရာသော့ချက်စကားစုတွေကိုစဉ်းစားသင့်တယ်။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်အသွားအလာသာမကဘဲစာရေးကိရိယာအသွားအလာကိုပါဂရုစိုက်လျှင်ဤကိစ္စကိုစဉ်းစားပါ။ ဥပမာအားဖြင့်မင်းကမင်းဟာဖိနပ်ချုပ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး Katowice မှာရှိတယ်။
ဒီမြို့မှာဖိနပ်ထုတ်လုပ်သူကိုလိုအပ်တဲ့သူတွေဟာရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ထဲမှာ "ဖိနပ်ထုတ်လုပ်သူ Katowice" ဆိုတဲ့စကားစုကိုထည့်ခြင်းအားဖြင့်သင့်ကိုပြproblemsနာမရှိစေပါ။ ဤနည်းအားဖြင့်သင်သည်သင်၏မြို့တွင်နေထိုင်နိုင်ဖွယ်ရှိသည့်ဖောက်သည်များနှင့်သင်ကမ်းလှမ်းသော ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုအတွက်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားသူများကိုသင်ဖွင့်သည်။ သင်ကဝဘ်ပေါ်တွင်မြင်နိုင်ပါကသင့်အကြောင်းကိုသူတို့သိလိမ့်မည်။ ဒေသခံ SEO သည်၎င်းကိုသင့်အားကူညီလိမ့်မည်။
အွန်လိုင်းစတိုးကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်သည့်အခါဂရုစိုက်သင့်သောနောက်ထပ်အရေးကြီးသောပြissueနာတစ်ခုမှာဝယ်သူနှင့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အတွက်နားလည်သင့်သောအမျိုးအစားနှင့်ထုတ်ကုန်များ၏အမည်များဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာထုတ်ကုန်အမျိုးအစားကိုအမည်ပေးသင့်သည် "1337-nike-shoes" နှင့်မ "1337 ထုတ်ကုန်များ - ပုံမှန်"။ အရောင်နည်းသောဥပမာတွင်အမျိုးအစားကို“ အားကစားဖိနပ်” ဟုခေါ်သင့်သည်။ “ အားကစား” ဟုမခေါ်သင့်ပါ။ အဆုံးတွင်“ အားကစားဖိနပ်” ဟူသောစကားစုသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပြီးနာမဝိသေသန“ အားကစား” ကိုယ်တိုင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်မဟုတ်ပါ။ အဆိုပါရှာဖွေရေးအင်ဂျင်), တန်ဖိုးရှိသော။
ထုတ်ကုန်အမည်များအတွက်လည်းအလားတူဖြစ်သည်။ ၄ င်းတို့သည်သူတို့၏အမည်နှင့်အပြည့်အ ၀ ကိုက်ညီသင့်သည်။ ထုတ်ကုန်၏အမည်သည်ပထမတစ်ခုအနေဖြင့်ပေးထားသောဆောင်းပါးအမျိုးအစားကိုဖော်ပြသင့်ပြီးကုန်ပစ္စည်းတစ်ခု၏သီးခြားသတ်မှတ်ချက်ကိုဖော်ပြသောအပိုဆောင်းအင်္ဂါရပ်များ (ဥပမာ၊ သူတို့သည်မော်ဒယ်၊ အရောင်၊ အမှတ်တံဆိပ်စသည်ဖြင့်) သင့်သည်။
အမည်အသေးစိတ်တိတိကျကျပြောရရင်၊ ဒီကုန်ပစ္စည်းဟာသူတို့ရှာဖွေနေတဲ့အရာကိုတိတိကျကျသိတဲ့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားသည့်သုံးစွဲသူထိမှန်လိမ့်မယ်။ ထို့ကြောင့်သူ/သူမသည်ပိုမိုဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည် သင်၏စတိုးဆိုင်တွင်ဝယ်ယူပါ။ သို့သော်၊ ထိုအမည်သည်အကောင်းဆုံးအရှည်ရှိပြီးရှည်လျားလွန်းသင့်ကြောင်းသတိရပါ။
ထုတ်ကုန်၏အမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောပြီးပြီဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဌါနမှသတ်သတ်မှတ်မှတ်ဆောင်းပါးတစ်ခုကိုစိတ် ၀ င်စားသောအသုံးပြုသူသည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်မှသွားသောနေရာ၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ စကားလုံးအနည်းငယ်ပြောရန်အချိန်ရောက်လာပြီ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ထုတ်ကုန်ကဒ်အကြောင်းပြောနေတာပါ။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုကဲ့သို့သောကတ်တစ်ခုပါ ၀ င်သင့်သည်ကိုအတိုချုပ်ရှင်းပြပါမည်။
စျေးနှုန်း (မြင်သာသောနေရာတွင်ထားခြင်း၊ သံသယမရှိဘဲ - စျေးနှုန်းသည်သုံးစွဲသူအားလှည့်ဖြားခြင်းမပြုရ) ရှာဖွေမှုရလဒ်များတွင်သင်၏ရာထူးများကိုထပ်တိုးရန်၊ ထည့်ပါ <strong> tag နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကို "စျေးနှုန်း"။ ထုတ်ကုန်ကဒ်၏ဤအပိုင်းသည်အရေးကြီးကြောင်းရှာဖွေရေးအင်ဂျင်စက်ရုပ်များကိုပြောပြလိမ့်မည်။
ဓာတ်ပုံများ (စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသည့်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုတင်ထားသောဗီဒီယိုကိုပူးတွဲတင်ပြခြင်းဖြစ်နိုင်သည် - အထူးသဖြင့်အဝတ်အစားများနှင့်ဖိနပ်များရှိသည့်အွန်လိုင်းစတိုးများနှင့်သက်ဆိုင်သည်);
ကဲ့သို့သောအခြားလိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက် ထုတ်ကုန်ရရှိနိုင်မှု, ပေးပို့အချိန် ဒါမှမဟုတ် ပြန်လာနိုင်ခြေ ;
ထုတ်ကုန်နှင့်ပတ်သက်။ ထင်မြင်ချက်များနှင့်သုံးသပ်ချက်များ (ကြယ်သို့မဟုတ်စာသားပုံစံဖြင့် - ဖောက်သည်များ၏ထင်မြင်ချက်များအတွက်တိုက်ပွဲဝင်သင့်သည်);
CTA (ခေါ်ဆိုမှုသို့) (ဥပမာ၊ " ရရှိနိုင်သည့်အခါငါ့ကိုသို့မဟုတ် "ယခု Buy" ငါ့ကိုအသိပေးပါ။
သင်၏ကဒ်ကိုအခြားအရာများဖြစ်သည့်အဆိုပြုထားသည့်ထုတ်ကုန်များ၊ အကြိုက်ဆုံး tab (သို့) အရွယ်အစားဇယားများဖြင့်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနိုင်သည် - သင်၏ကဒ်ပြားကိုထပ်မံတိုးချဲ့ရန်သင်မည်မျှ (တိုးချဲ့လိုသည်) သည်သင်နှင့်သာသက်ဆိုင်သည်။ ဖြစ်နိုင်ခြေ။
ထုတ်ကုန်ကဒ်အကြောင်းပြောသောအခါ AIDA ပုံစံကိုလည်းဖော်ပြသင့်သည်။ ဤပုံစံနှင့်အညီသုံးစွဲသူအတွက်အဆင့်လေးဆင့်ဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်ဆိုလျှင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
လှုပ်ရှားမှု (အရေးယူမှု - အွန်လိုင်းစတိုးတစ်ခု၏အမှု၌၎င်းသည်ဥပမာ ၀ ယ်ယူခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်)
ခေါင်းစဉ်နှင့် meta ဖော်ပြချက်
စတိုးဆိုင်တည်နေရာကိုဆွေးနွေးသည့်အခါထုတ်ကုန်စာမျက်နှာ၏အလွန်အရေးကြီးသောအချက်နှစ်ချက်ဖြစ်သောခေါင်းစဉ်နှင့် meta ဖော်ပြချက်။ ထို element နှစ်ခုလုံးသည် HTML code တွင်ပါ ၀ င်ပြီးအသုံးပြုသူများအတွက်ရှာဖွေမှုရလဒ်တွင်တွေ့နိုင်သည်။
ခေါင်းစဉ်နဲ့စကြရအောင်။ ထိုခေါင်းစဉ်သည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏တည်နေရာအပေါ်တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိသည်မှာလျှို့ဝှက်ချက်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်ဂူဂဲလ်၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်၏အကြောင်းအရာကိုရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကိုနားလည်ရန်ကူညီနိုင်ပြီးပေးထားသည့်စာမျက်နှာခွဲတစ်ခုတွင်အသုံးပြုသူများကိုအတိုချုပ်ဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။ ခေါင်းစဉ်တွင်အဓိကအားဖြင့်သော့ချက်စာလုံးပါသင့်သည်။ ဖြစ်နိုင်သည်မှာ၎င်းအဆုံးတွင်သင်၏အွန်လိုင်းစတိုး၏အမည်ကိုထည့်ရန်ဖြစ်သည်။ ခေါင်းစဉ်တွင်စာလုံးရေ ၆၅-၇၀ ပါဝင်သင့်သည်။
Meta ဖော်ပြချက်သည်စတိုးဆိုင်များ၏တည်နေရာအပေါ်တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုမရှိပါ - နှစ်ပေါင်းများစွာ Google ၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်မဟုတ်တော့ပါ။ သို့သော် meta ဖော်ပြချက်သည်သင်၏ SEO ကိုအောင်မြင်စွာအထောက်အကူပြုနိုင်သည်ဟူသောအချက်ကိုမပြောင်းလဲပါ။ အကယ်၍ ၎င်းသည်စနစ်တကျတည်ဆောက်ထားပါကအသုံးပြုသူအား ၀ က်ဘ်ဆိုက်သို့လည်ပတ်ရန်တိုက်တွန်းနိုင်သည် (၎င်းသည် CTR ဟုခေါ်သည်ကလစ်နှိပ်ခြင်းနှုန်းကိုတိုးတက်စေသည်)၊ ၎င်းသည်အော်ဂဲနစ်အသွားအလာကိုတည်ဆောက်ပေးလိမ့်မည်။
meta ဖော်ပြချက်သည်စာလုံးရေ ၁၅၀-၁၆၀ ရှည်သင့်သည်။ (၎င်းသည်ကြာရှည်ပါကရှာဖွေမှုရလဒ်များတွင်အပြည့်အ ၀ ပြသနိုင်မည်မဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်) meta ဖော်ပြချက်တွင်သော့ချက်စာလုံးပါ ၀ င်လျှင်ကောင်းသည်။ meta ဖော်ပြချက်သည်စာမျက်နှာပါအကြောင်းအရာများကိုအတိုချုပ်ဖော်ပြရန်နှင့် link ကိုနှိပ်ရန်အားပေးသည်ကိုသတိရပါ။
Bill Gates ၏ ၁၉၉၆ ဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်အရ 'content is king' - အကြောင်းအရာသည်ဘုရင်ဖြစ်သည်! ဤစကားစုသည်အထူးသဖြင့်အွန်လိုင်းစတိုးဆိုင်များအတွက်မှန်ကန်သည်။ သူတို့၏သဘောသဘာဝအရထုတ်ကုန်စာမျက်နှာများစွာရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာစာသားနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကုသမှုတိုင်းသည်အွန်လိုင်းစတိုးမှရရှိသောပစ္စည်းများအပေါ်ကြီးမားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလိမ့်မည်။ ထိုသို့သောအခွင့်အလမ်းကိုလက်လွတ်မခံနိုင်ပါ။ လုပ်ငန်းရှင်အတော်များများသည်ဤကန ဦး နှင့်အလွန်အရေးကြီးသောအဆင့်တွင်ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များမှထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက်များကိုကူးယူခြင်းသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်များအကြားကူးယူခြင်းတို့မအောင်မြင်ပါ။
ဤကျမ်းများသည်မကြာခဏရောင်းဝယ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကောင်းစွာပြင်ဆင်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဂူဂဲလ်ကသူတို့ကိုပုံတူပွားထားသောအကြောင်းအရာများအဖြစ်ရှုမြင်သည်။ ၎င်းသည်ပုံတူကူးထားသည့်စာမျက်နှာငယ်များအားရှာဖွေမှုရလဒ်များကိုမြင့်တက်စေရန်ခွင့်မပြုပါ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီဖော်ပြချက်မှာသော့ချက်စာလုံးတွေပါသင့်တယ်။ ဒါပေမဲ့ထုတ်ကုန်နာမည်တွေပါတဲ့ရှည်လျားလှတဲ့စကားစုတွေကိုသင်အာရုံစိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီစကားစုတွေဟာသင့်တော်တဲ့အကြိမ်အရေအတွက်ပေါ်လာသင့်တယ်။
အကြောင်းအရာမိတ္တူပွားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ခေတ္တတည်းခိုခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြင်ပပုံတူကူးခြင်း (ထုတ်လုပ်သူများထံမှထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက်များကိုကူးယူခြင်းမှဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့်) နှင့်သာမကအတွင်းပိုင်းတွင်ပါလုပ်ဆောင်နိုင်သည်ကိုသတိပြုသင့်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိစာမျက်နှာများစွာတွင်တူညီသောစာသားများရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။
အွန်လိုင်းစတိုးဆိုင်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကွဲပြားမှုအမျိုးအစားများ (ဥပမာအရောင်) တွင်ထုတ်ကုန်တစ်ခုရှိသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ထုတ်ကုန်တစ်ခု၏အရောင်အမျိုးအစားတစ်ခုချင်းစီနှင့်အတူတူညီသောဖော်ပြချက်ထားသည့်အခါထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေမျိုးဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ လူအများအပြားကဤလုပ်ဆောင်မှုသည်အတွင်းပုံတူကူးခြင်း၏အကြောင်းရင်းဖြစ်နိုင်သည်ကိုသတိမထားမိကြပါ။ သင်သည်အကြောင်းအရာများ၏မိတ္တူကူးခြင်းကိုသင်မည်သို့တိုက်ခိုက်နိုင်မည်ကိုလေ့လာလိုပါကအခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီး Semalt ကျွမ်းကျင်သူကသင့်ကိုဂရုစိုက်ပါလိမ့်မည်။
၀ က်ဘ်ဆိုက်နေရာချထားခြင်းတွင်နောက်ထပ်အကြောင်းအရာအသစ်တစ်ခုရှိသည်။ ဝဘ်ဆိုက်ပေါ်ရှိအကြောင်းအရာအသစ်များကိုအမြဲတမ်းရရှိနိုင်စေရန်မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း။ အရိုးရှင်းဆုံးအဖြေကတော့ဘလော့ဂ်တစ်ခုဖွင့်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ခဏတာတွေ့ရလိမ့်မည်။ အွန်လိုင်းစတိုးများကိုနေရာချထားရန်နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုရှိသည်။ ဘာ? ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက်ပြောင်းလဲပါ။
ကျွန်ုပ်တို့ရေးသားပြီးသည့်အတိုင်း၊ အွန်လိုင်းစတိုးနှင့်ပုံမှန်ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုအကြားအခြေခံကွဲပြားခြားနားမှုတစ်ခုမှာစာမျက်နှာငယ်များ၏နံပါတ်နှင့်ပါ ၀ င်သည့်အကြောင်းအရာများဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာအခြားစာသားသို့မဟုတ်ထုတ်လုပ်သူနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုဖြည့်စွက်ခြင်းကဲ့သို့သောကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက်များသို့ပြောင်းလဲထားသောရိုးရှင်းသောပြောင်းလဲမှုများပင်လျှင်စာမျက်နှာ၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းကိုပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်သည်၊ ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက်များတွင်စာသားအပိုင်းအစတစ်ခုကိုလည်းထုတ်ကုန်အမည်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်အခြားသော့ချက်စာလုံးတစ်လုံးနှင့်လည်းထည့်နိုင်သည်၊ ၎င်းသည်ဤစကားစုအတွက်အွန်လိုင်းစတိုး၏အနေအထားကိုတိုးပွားစေသည်။
သတိရပါ၊ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက်များသည်အပိုထူးခြား၊ ထုတ်ကုန်ကိုပြသရန်နှင့်တစ်ချိန်တည်းတွင် ၀ ယ်ရန်အားပေးပါ။ ဖော်ပြချက်သည်အသေးစိတ်ဖြစ်သင့်သည် (၎င်းကိုအဓိကအားဖြင့်သတင်းအချက်အလက်ဖြစ်ရန်ရည်ရွယ်ကြောင်းသတိရပါ) နှင့်တစ်ချိန်တည်းတွင်အတိုချုပ်။ တိကျသောနှင့်တိကျသောသတင်းအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုသူအားအာရုံစူးစိုက်ပါ၊ သို့သော်အကျိုးကျေးဇူးများ၏ဘာသာစကားကိုမမေ့ပါနှင့်။
သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုနောက်ဆုံးပေါ်အဆင့်မြှင့်ရန်အသုံးအများဆုံးနည်းလမ်းမှာကောင်းမွန်စွာကောင်းမွန်သောကော်ပိုရိတ်ဘလော့ဂ်တစ်ခုဖွင့်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤလုပ်ဆောင်မှုမှယူဆောင်လာသည့် SEO တန်ဖိုးသည်အလွန်လူသိများပြီးဖြစ်သည်။ ဘလော့ဂ်တစ်ခုဖွင့်ခြင်းသည်နေရာချထားသည့်စာမျက်နှာကို update လုပ်ခြင်းအပြင်ဝက်ဘ်ဆိုက်အသွားအလာတိုးမြှင့်ခြင်း၊ အမြန်သော့ချက်စာလုံးများ၏နောက်ခံကိုတိုးချဲ့ခြင်းသို့မဟုတ်သတ်သတ်မှတ်မှတ်သော့ချက်စာလုံးများကိုအားကောင်းစေခြင်းတို့ကိုခွင့်ပြုသည်။ သို့သော်၊ ၎င်းသည်ဘလော့ဂ်တစ်ခုဖွင့်လှစ်နိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောတန်ဖိုးများမဟုတ်ပါ။ ကောင်းမွန်စွာပြေးနိုင်သောကြောင့်၎င်းသည်အပြည့်အ ၀ လည်ပတ်နိုင်သည် အကြောင်းအရာစျေးကွက် သင်၏အွန်လိုင်းစတိုးအတွက်။ ၎င်းသည်သင့်အားစက်မှုလုပ်ငန်းတွင်ကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး ၏ပုံရိပ်တစ်ခုဖန်တီးရန်နှင့်သင့်အမှတ်တံဆိပ်ကိုဝဘ်တွင်မှတ်မိစေရန်ကူညီနိုင်သည်။
သင်၏ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုအကြောင်းစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြီးနောက်ဝယ်သူတစ် ဦး သည်နောက်ဆုံး၌၎င်းကို ၀ ယ်ရန်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်မှာအခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကွာအဝေးလျော့နည်းသွားပြီးသင်၏အွန်လိုင်းစတိုးတွင်အင်တာနက်သုံးစွဲသူများယုံကြည်စိတ်ချမှုတိုးလာလိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာသူတို့သည်သင်၏စတိုးဆိုင်၌ကမ်းလှမ်းသောထုတ်ကုန်များထဲမှတစ်ခုကိုဝယ်ယူလိုပါကသူတို့သည်သင့်ထံသို့ပြန်လာရန်ပိုမိုဖြစ်နိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ ဘလော့ဂ်ပို့စ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြမည့်ထုတ်ကုန်များကိုသတိရှိရှိရွေးချယ်ခြင်းသည်အလွန်ကောင်းသောအကြံဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ဘောလုံးချန်ပီယံရှစ်ကာလအတွင်းအလားအလာရှိသည့် ၀ ယ်ယူသူများ၏ရုပ်မြင်သံကြားစက်အသစ်သို့ဆွဲဆောင်ခြင်းသည်ကျိုးနပ်ပါသည်။
ဘလော့ဂ်တစ်ခုတွင်အချိန်ဖြုန်းသင့်သည်မသေချာသေးပါကဆက်သွယ်ရန်သေချာပါစေ SEO ကျွမ်းကျင်သူ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်သင်အကြံပေးရန်။
အွန်လိုင်းစတိုးကိုထိထိရောက်ရောက်ဘယ်လိုနေရာချမလဲ။ ဤမေးခွန်း၏အဖြေကိုကျွန်ုပ်တို့သိပြီးဖြစ်သည်။ သင်၏အွန်လိုင်းစတိုးကိုအဘယ်ကြောင့်စနစ်တကျနေရာချသင့်သနည်း။ အွန်လိုင်းစတိုးတစ်ခု၏ကောင်းမွန်သောနေရာချထားမှုသည်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်သို့ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုသို့ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုသို့တိကျသောထုတ်ကုန်များကိုရှာဖွေနေသောအလားအလာရှိသောဖောက်သည်များကိုဆွဲဆောင်ရန်သင့်အား ၀ က်ဘ်ပေါ်တွင်ကောင်းမွန်စွာမြင်နိုင်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းသည်မြို့တော်စတုရန်းကြီး၏အလယ်တွင်တည်ရှိသောစတိုးဆိုင်တစ်ခုနှင့်တူသည်။ စတုရန်းရှိစတိုးဆိုင်သည်ယုံကြည်စိတ်ချမှုကိုအားပေးပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့၌လက်ချောင်းထိပ်များရှိပါကမည်သူ့ကိုကောက်လိမ့်မည်နည်း။